Yangon Digital CV Job Fair ကိုဘာကြောင့်သွားသင့်တာလဲ
အချက် ၅ ချက်ဖော်ပြထားပါတယ်။
MyJobs.com.mm မှ ကြီးမှုးကျင်းပမယ့် Yangon Digital CV Job Fair ကို လာမယ့် မတ်လ(၉)ရက်နေ့ မနက် (၉)နာရီကနေ ညနေ(၆)နာရီထိ Rose Garden Hotel မှာ ကျင်းပသွားတော့မှာပါ။ ဘာကြောင့် ဒီပွဲကို သွားသင့်သလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကောင်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအချက်ကိုတွေကို အခု Duwun က ပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်မှာ နေထိုင်ခြင်း
အခုက ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ် မဟုတ်လား။ အရာအားလုံးကို Digital ခေတ်ဖြစ်နေချိန် အလုပ်ရှာတဲ့နေရာမှာလည်း Digital Tools တွေကို အကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရပါတယ်။ အခု Myjobs ကကျင်းပတဲ့ Yangon Digital CV Job Fair ပွဲကို တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် အနာဂတ်မှာ သင်တို့ အားလုံးဟာ အလုပ်လျှောက်လွှာကို စာရွက်နဲ့ မဟုတ်တော့ဘဲ QR Code ဖြင့် အလုပ်လျှောက်ထားနည်းတွေ၊ စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကတဆင့် ဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ ဆိုတာကို အသေးစိတ်သိရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် Digital CV နည်းလမ်းနဲ့ အလုပ်လျှောက်ခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေကို Yangon Digital CV Job Fair မှာ လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြပွဲအတွင်း ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီကြီးပေါင်း(၃၀)ကျော်က ပါဝင်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ Face to face ဆွေးနွေးနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။အလုပ်အကိုင်တွေကို တစ်နေရာတည်း တစ်ချိန်တည်းမှာ အခမဲ့ လျှောက်ထားနိုင်ဦးမှာ ဖြစ်လို့ အလုပ်ရှာဖွေနေသူတိုင်း လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ ပြပွဲကြီးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ပြပွဲကြီးမှာ သင့်အတွက် အခမဲ့ လျှောက်ထားနိုင်မယ့် အလုပ်အကိုင် လစ်လပ်နေရာပေါင်း (၅၀၀) ကျော်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီ (၅၀၀) ကျော်ထဲကမှ သင်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်အကိုင်ကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ရှာဖွေ လျှောက်ထားနိုင်မှာပါ။ ရွေးချယ်စရာ အလုပ်အကိုင်များစွာရှိတာကြောင့် သင့်အတွက် အလုပ်ရဖို့ မခက်ခဲတော့ပါဘူး။
၄။Free Seminar တွေ
သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်နေတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိ Speaker တွေက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဟောပြောဆွေးနွေးပေးမယ့် အစီအစဉ်တွေလည်း ရှိနေမှာပါ။ အလုပ်ရှာနေတဲ့ သင့်အတွက် ဘယ်လို အလုပ်အကိုင်တွေကို လုပ်ကိုင်သင့်သလဲ? ဘယ်လို အလုပ်အကိုင်က သင့်နဲ့ ကိုက်ညီလဲ? စတာတွေကို ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲတွေက တစ်ဆင့် သိရှိခွင့်ရဦးမှာနော်။
၅၊ Free Shuttle Bus
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေအောင် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် (ကျောက်တိုင်မှတ်တိုင်) မှ ပွဲကျင်းပရာ Rose Garden Hotel အထိ Free Shuttle Bus တွေ စီစဉ်ပေးထားတာကြောင့် အခက်အခဲမရှိ အဆင်ပြေပြေနဲ့ ပြပွဲကို သွားရောက်နိုင်မှာပါ။
ကဲ ဒီ အချက်လေးတွေ ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ မတ်လ(၉)ရက်နေ့ တစ်ရက်တည်း ကျင်းပမယ့် Yangon Digital CV Job Fair ကို သွားရောက်ပြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းသစ်တွေကို ရှာဖွေလိုက်ရအောင်။